Issimada Sool Sanaag iyo Cayn: “Waxaanu la yaabsanahay annagaa idin xukunna, annagaad naga mid tihiin, dowladayadana waad ku khasbantihiin, haddaad diiddaana waa idin laynaynaa.” – Radio Daljir
Maajo 30, 2018 3:03 b 0
Shir aan caadi aheyn, abidna asaga oo kale aan hore uga dhicin gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn, ayaa waxaa maanta magaalada Buuhoodle isugu yimid Issimada iyo waxgaradka gobolka Cayn.
Isimada ayaa waxa ay hadalkooda ku bilaaben in ay shirkan “kaga hadlayaan dad aanu walaalo nahay, darisna nahay, waxna aynaan wada sameysan, waxna aynaan ku heshiin, oo annaga iyo dhulkayagana sheeganaya, duulaamana soo qaadayey intaas, aanu ku dulqaadaneynay kala maarmi la’aanta Soomaaliya.”
Issimada oo hadalka sii wata, taariikhdana dib u raacaya waxa ay yiraahdeen, “waxaan beesha caalamka u sheegaynaa annagu Puntland baan wax wada dhisanay; annagu Puntland baan heshiis galnay. Soo tii ay noo timid sagaalka dowladood ee reer Yurub! Soo tii saxiixa nalaga qaaday! Soo tii Garaad Cabdiqani, Garaad Saleebaan, Garaad Abshir, Suldaan Siciid, Ugaas Cabdillaahi Ciise … soo tii ay noo yimaadeen sagaalka safaaradood ee reer Yurub ee Nayroobi joogay. Soo kuwii naga xaqiijiyey in aan Puntland wax wada dhisanay markii Cabdullahi Yuusuf lagu doortay Garoowe.”
Taariikh raac kabacdi, waxa ay bilaabeen abhin ay abhinayaan maamulka iyo qabiilka Somaliland, ayaga oo yiri, “waana abhiney. Ilaahay ka baqaan niri. Walaalaynu nahaan niri. Duullaanka iyo waxa aydan xaq noogu laheyn naga daayaan niri. Haddaad Islaam tihiin naga baxaan niri.”
“Waxaanu la yaabsanahay waxay rabaan. Waxaanu la yaabsanahay waxay sheeganayaan. Waxaanu la yaabsanahay annagaa idin xukunna annagaad naga mid tihiin, dowladayadana waad ku khasbantihiin, haddaad diiddaana waa idin laynaynaa.”
Abhin kabacdi, Issimadu waxa ay ku baaqeen in samirkii dhammaaday oo la is difaaco. In la difaaco Sool, Sanaag iyo Cayn. In sharaftii iyo karaamadii dadka iyo gobolka la soo celiyo. In aan loo kala harin difaaca dadka iyo deegaanka.
Warbxinta Issimada Gobolka Cayn waxaa inoo haya Iid Maxamed Cabdi, kana soo diray Buuhoodle.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 454 Wararka 17290